CHRA Inoratidzira Ichiti VaChombo Vaferefetwe Huori Hwavari Kupumhwa
Nhengo dzerimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare re Combined Harare Residents Association, kana kuti CHRA, dzaratidzira muguta guru renyika dzichinyunyuta nehuwori hunonzi hwatekeshera mukanzuru yeHarare. Varatidziri ava vanotiwo havasi kufara nehuwori hunonzi huri kuitwa negurukota rezvematunhu, VaIgnatius Chombo.
Vanhu vanodarika mazana mashanu ndivo vapinda mumigwagwa kuchinaya vakapfeka hembe chena dzakanyorwa kuti "Lets Resist Corruption" uye vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana.
Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi "Chombo Wanyanya Huwori neHumbavha".
Varatidziri ava vatanga kuratidzira pamahofisi ekanzuru yeHarare pa Town House ndokufamba naJulius Nyerere, vakazokwidza naNelson Mandela vakananga kuAfrica Unity Square apo pavapedzera kuratidzira uku.
Vachitaura nevaratidziri ava paAfrica Unity Sqaure, sachigaro we GHRA, VaSimbarashe Moyo, vati hafasi kufadzwa nehuwori hwaVaChombo pamwe nevari mukanzuru uku veruzhinji mu Harare vachiomerwa nehupenyu.
Mumwe mugari wekuMabvuku, VaMoses Kawara, vati mitero yedzimba iri kudhurira vagari uye VaChombo vanofanira kuferefetwa nenyaya yehuwori yavanonzi vari kuita.
Mumwe mugari wekuBudiriro ati anonzi Amai Netsai Nyamanhete vatsinhirawo zvataurwa naVaMoyo pamwe naVaKawara.
Papera kuratidzira uku, vatungamiriri veCHRA vaendesa gwaro renyunyuto dzavo kumahofisi emutungamiri wehurumende, Va Morgan Tsvangirai, vachivakurudzira kuti vaone zvavangaite nehuwori hwaVaChombo.
Mugwaro iri, CHRA inoti haisi kufara nekumiswa basa kwemamwe makanzura pasina matanho akatorerwa VaChombo pamwe namuzvina bhizimusi, VaPhillip Chiyangwa, avo vanonzi vakashandisa huwori kutenga dzimba nemasitendi akawanda muHarare pamwe nekune mamwe madhorobha.
CHRA yashorawo meya weHarare, VaMuchadeyi Masunda, avo vanonzi vakati nyaya yaVaChombo naVaChiyangwa isiyanwe nayo ichiti izvi zvinoita kuti huwori hutekeshere munyika, vashoma vachizvimba matumbu veruzhinji vachidya nhoko dzezvironda.
CHRA inotiwo inoda kuti makanzura ose akambomiswa basa adzoserwe pabasa uye VaChombo vambomiswa basa segurukota rezvematunhu uku vachiferefetwa pamhosva dzavari kupomerwa.
Gwaro ratumirwa neCHRA kuna Va Tsvangirai iri rakurudzira vatungamiri vemapato ari muhurmende yemubatanidzwa kuti vaumbe komisheni inoferefeta VaChombo uye kuti nyaya yavo iongororwe ne Joint Monitoring and Implementation Committee kana kuti JOMIC. CHRA yati dzimba nemasitendi anonzi akatengwa naVaChombo vachishandisa huwori zvinofanira kudzoserwa kuvagari vemuHarare kana nyaya yavo yapedza kuferefetwa.
Hatina kukwanisa kutaura naVaChombo, VaMasunda pamwe naVaChiyangwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi VaMoyo vati VaChombo vakaramba kutambira gwaro renyunyuto dzevagari